“Bun aan cabbo ayaa cimrigaygu boqol ku dhaafayaa” - BBC News Somali
“Bun aan cabbo ayaa cimrigaygu boqol ku dhaafayaa”
Toddobaadkan waxaa marti ku ahaa Dave Asprey, oo ah aas saaha sharikad Kafeega soo saarta oo lagu magacaabo Bulletproof.
Dave Asprey oo Maraykanka u dhashay ayaa qorshaynaya in uu noolaado 180 sano. Arrintaasina ma ahan mid dheel ah ee waa ka dhab.
"Ma ahan arrintani sayniskii khiyaaliga ahaa, kolleey qof uun baa sidaas samayn lahaa, aniga ayaana u diyaar ah" ayuu yidhi ninkan 45 jirka ah.
Ayadoo dad badan ay Mr Asprey ku tilmaamaan nin la yimid "hab dhaqan aan looga horrayn", ayaa isku tilmaama in uu yahay "qofkii ugu horreeyey ee abuurka jirka aadanaha wax ka baddali lahaa".
Qofka iskudaya in uu jirka aadanaha wax ka badalo ayaa ah qof adeegsada Sayniska iyo Tiknooliyadda si uu caafimaadkiisa u wanaajiyo, waxa uuna qofka noocaas ahi sameeyaa waxyaabo dadka caadiga ahi ay waalli u arkaan.
Qorshaha Mr Asprey ayaa ah mid uu ku niyadsan yahay. Ninkan ayaa ku dadaalaya in uusan dhiman si uu arrintaas uga guul gaarana waxa uu lix bilood oo kasta iska baddalaa dhuuxa lafihiisa, wuxuu sidoo kale dib isugu tallaalaa unugyo caafimaad qaba oo jirkiisa ka mid ah oo la bacrimiyey.
Mr Asprey ayaa sheegaya in uu haatan hagaajinta jirkiisa ku bixiyey lacag gaaraysa $1 milyan oo dollar si uu uga shaqaysiiyo maskaxdiisa iyo jirkiisa.
Kafeega ninkaan uu ka ganacsado ee la yiraahdo Bulletproof coffee ayaa ka kooban saddex wax soo saar oo kale duwan. Waa kafee madoow oo lagu daray subag iyo saliidda qumbaha oo la sifeeyey.
Ninkan ayaa sheegaya in cabitaanka noocaas ah uu gacan ka gaysanayo wanaajinta caafimaadka lixaadka iyo maskaxda labadaba.
Tan iyo markii Mr Asprey uu sannadkii 2012-kii bilaabay iibinta cabbitaankaas qaybaha kala duwan isugu jira, ayaa waxaa laga iibsaday 160 milyan oo koob, asagoo taageero badanna ku helay.
Balse Mr Asprey ayaa dhaleecayn kala kulmay bahda caafimaadka, oo farta ku fiiqay in ninkaasi aanu lahayn wax aqoon caafimaad ah, ama tababar dhanka nafaqada ah. Waxayna sheegeen in subag iyo kafee la isku daro aanay caafimaadka u wanaagsnaayn.
Fikaradda Bulletproof coffee ayaa Mr Asprey ku dhalatay sannadkii 2004-tii, mar uu sii socday gobolka Tibet.
Ninkaan oo dalka Mexico ku dhashay sannadkii 1973-dii, ayaa ku takhasusay cilmiga IT-ga. Balse mar ayaa miisaankiisu faraha ka batay, waxa uuna ka kici waayey sariirta caafimaad darro awgeed. Markii uu ugu miisaan cuslaa ayuu sheegay in uu gaaray 136kg.
Si uu caafimaadkiisa u hagaajiyo ayaa wuxuu aaday gobolka Tibet.
Markii uu dib ugu soo laabtay halkii uu dagganaa ee California, ayaa Mr Asprey waxa uu bilaabay in uu sameeyo tijaabooyin uu ku hal abuurayo cabitaan asaga u gaar ah.
Tijaabooyinkiisa ayaa Mr Asprey waxa uu ku ogaaday in subagga lo'du uu caafimaadka u wanaagsan yahay iyo in kafeegu uu shaaha ka wax tar badan yahay.
Hal abuurkii ayuu soo bandhigay sannadkii 2009-kii. Saddex sano kaddibna waxa uu bilaabay in uu iibiyo kafeegiisa saddexda waxyaabood ka kooban ee Bulletproof coffee.